Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Kurdiyiinta Ciraaq oo Heegan Lagaliyay.
Ciidanka Kurdiyiinta Ciraaq oo Heegan Lagaliyay.
Posted by ONA Admin	/ October 15, 2017
Ismaamulka Kurdida ee waqooyiga dalka Ciraaq ayaa heegan sare galiyey ciidamadooda kadib markii ciidamada dowlada dhexe ee Ciraaq ay soo buuxiyeen xuduuda ay wadaagaan ee gobalka Kirkuk.
Ciidamada militariga ee ka amar qaata xukuumada dhexe ee Baqdaad oo ay weheliyaan maleeshiyaadka ay dowlada IRAN tababartay ee shiicada ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay soo buuxinayey deegaano ka tirsan koonfurta gobalka Kirkuk oo kamid ah dhulka ay maamulidiisa isku heystaan Baqdaad iyo maamulka Kurdida.
Dhaq dhaqaaqan militari ayaa imaanaya labo todobaad kadib markii aftidii loo qaaday shacabka Kurdida ay taageereen inay gooni uga go’aan dalka Ciraaq, magaalada Kirkuk iyo gobalkaasi ayaa muhiim u ah kurdida oo sheegay inay dhiig u daadin doonaan difaaca dhulkaasi oo laga soo saaro batroolka ugu badan ee kasoo baxa Waqooyiga Ciraaq.
Inkastoo gobalka Kirkuk ay u badan yihiin qawmiyada Kurdida ayey hadana waxaa dhulkaasi ku dhaqan qawmiyado kale sida Turkida iyo Carab oo qaarkood kasoo horjeeda in dalka Ciraaq la kala gooyo. Kurdida ayaa geeyey Kirkuk ciidamo gaaraya 6000 askari iyagoo ugu baaqay in Beesha Caalamka ay soo dhex gasho arrintan intaan halkaasi dagaal ka qarxin.